Nepali Rajneeti | किन ४० वर्ष कटेपछि परपुरुष संग संबन्ध राख्न चाहान्छन् महिला ?
किन ४० वर्ष कटेपछि परपुरुष संग संबन्ध राख्न चाहान्छन् महिला ?
बैसाख १, २०७८ बुधबार २८६ पटक हेरिएको
भनिन्छ जीवनमा एकपटकमात्रै विवाह गरिन्छ । विवाह गरेपछि वैवाहिक सम्बन्धलाई बचाउन र राम्रो बनाउन मै बढी जोड दिइन्छ । वैवाहिक सम्बन्ध यस्तो सम्बन्ध हो जुन संसारका हर कोहिका लागि जीवनभरीको साथ हो । जसमा विश्वास र माया भरिएको हुन्छ ।
४० वर्षपछि महिलाहरुले आफ्ना पार्टनरबाट यौ;न सन्तुष्टी नपाउने भएकाले दोस्रो पुरुषतर्फ आर्कषित हुने अध्ययनमा उल्लेख छ ।